Bogga ugu weyn 15 Caado Oo Keeni Doonta Inaad Lacag La'aan Ku Noqotid 2021
Ahaanshaha lacag la'aan waa wax soo saar caadooyin ula kac ah oo wax-soo-saar leh oo ku wajahan yoolka.
Waxaa jira khuraafaadyo badan iyo kuwa khaldan marka ay timaaddo xorriyadda maaliyadeed, shaqsiyaadkuna waxay ka qaadan karaan talooyin badan khubaro maaliyadeed oo caan ah, khubaro is-ammaanay, iyo dad-weyne. Dib u fiiri caadooyinkayaga ugu sarreeya 15 oo horseedi kara nolol madaxbannaan oo dhaqaale ahaan ka badan.
Maxay ka dhigan tahay Qof lacag la’aan ah?
Lacag intee le'eg ayaa loo tixgeliyaa inay tahay lacag la'aan?
Waqtigee Ayey Lacag -La'aantaadu Tahay?
1. 25ka jeer ayaa xukuma
2. Xeerka 4%
Maxay Dareentaa Inay Lacag La'aan Tahay?
Sida Loo Helo Xorriyadda Maaliyadeed
Waa maxay Caadooyinka kaa caawin doona inaad lacag la'aan ahaato 2021?
Deji Yoolalka Nolosha
2. Samee Miisaaniyad
3. Si buuxda u Bixi Kaararka Amaahda
4. Abuur Kaydka Tooska ah
5. Bilaw Maalgelinta Hadda
6. Daawo Deyntaada
7. Wada hadal
8. Waxbarashada Joogtada ah
9. Dayactir habboon
10. Noloshaada Hoosteeda ku Noolow
11. Hel La -taliye Maaliyadeed
12. Daryeel Caafimaadkaaga
Raadinta dad badan ayaa ah in la gaaro xorriyad dhaqaale. Xorriyadda maaliyadeed guud ahaan micnaheedu waa inaad haysato kayd ku filan, maalgelin, iyo lacag caddaan ah si aad u siiso hab -nololeedka aad rabto naftaada iyo qoyskaaga. Xorriyadda maaliyadeed waxay qofka u oggolaanaysaa inuu hawlgab noqdo ama uu raadsado xirfadda uu rabo iyada oo aan la wadin isagoo kasbanaya qaddar go'an sannad kasta.
Nasiib darro, tiro aad u badan oo shaqsiyaad ah ayaa ku guuldareysta inay gaaraan. Waxay si weyn ugu culus yihiin deynta sii kordheysa, xaaladaha degdegga ah ee maaliyadeed, kharashaadka khayaanada ah, iyo arrimo kale oo ka hor istaaga inay fuliyaan yoolalkooda. Kadibna waxaa jira dhacdooyin lama filaan ah, oo ay ku jiraan duufaan ama dhulgariir — ama masiibo — oo qorshayaasha rogmata oo daaha ka qaata godadka shabaqyadooda badbaadada oo aan markii hore muuqan.
Qof walba hal dhibic ama mid kale wuxuu la kulmaa dhibaato dhaqaale laakiin 15kaan Hab -dhaqameed ee ka dhigaya joogitaankaaga dhaqaale ahaan 2021 inuu kuu keeno The Wealth Circle (TWC), waxaad hubtaa inaad dhaqaale ahaan xor u ahaan doonto dhammaan 2021 iyo wixii ka dambeeya.
Akhri ALSO: 15 Khaladaad Maaliyadeed Ee Ugu Weyn Dadku Sameeyaan
Si aad u noqoto mid lacag la'aan ah ama madaxbannaan, xaddiga lacagta aad u baahan tahay way kala duwan tahay iyadoo ku xiran dakhligaaga hadda iyo hab nololeedkaaga.
Tusaale ahaan, celcelis ahaan Ameerika wuxuu u baahan yahay ilaa 1.5 Milyan oo doolar si uu u noqdo mid lacag la'aan ah, laakiin shaqsi ayaa go'aamin kara inta uu/ay u baahan tahay inuu keydiyo isagoo adeegsanaya xeerka boqolkiiba 4.
Qoraal guud, si aad lacag la'aan ugu noqoto, maalgelintaada iyo qiimaha saafiga ahi waa inay u dhigmaan 25 jeer kharashyada sannadlaha ah. Taasi waa qeexitaan guud ahaan la aqbalay. Waxay la jaanqaadeysaa waxa loo yaqaan xeerka boqolkiiba afar.
Qodobka qof la sheego inuu dhaqaale ahaan xor yahay wuxuu ku tiirsan yahay laba xeer oo suulka ah sida soo socota:
Xeerka 25 -ka jeer wuxuu ka mid yahay xeerarka go'aamiya xorriyadda maaliyadeed wuxuuna dhigayaa mar haddii aad keydiso 25 jeer kharashaadkaaga nolosha sannadlaha ah, inaad haysato lacag kugu filan oo aad hawlgab ku noqoto.
Xeerka 4% waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo inta keydka hawlgabka ee lacagta aad ku noolaan karto sannad walba.
Waa hadafka qof walba in uu noqdo lacag la'aan. Rabitaankaagu intaas ma ka badan yahay? Waxaa laga yaabaa in rabitaankaagu yahay inaad dhisato dhisme cabbirkiisu yahay meel aad u qurux badan. Ama aad rabto inaad ku wareegto dhammaan waddamada adduunka. Dhammaan riyooyinkan iyo rabitaanadani waxay leeyihiin hal shay: Waxay ku saabsan yihiin inay dhaqaale ahaan xor ahaadaan.
Awoodda aad ku sii deyn karto shaqo aadan raalli ka ahayn, aad fasax u aaddo sababta oo ah waxaad rabtaa oo keliya, ama inaad ka baxdo shaqada ka dib maalin dhab ahaan hawsha loo qabtay, waa nooc xorriyad ah. Qoraal gaar ah, waa xorriyad dhaqaale oo shaqsiyeed. Taas macnaheedu waa inaad haysato lacag aad u badan oo aadan u baahnayn inaad ka shaqayso si aad u daboosho baahiyahaaga aasaasiga ah.
Dareenka ah inaad lacag la'aan tahay waa mid u muuqda mid la yaab leh laakiin aad u macquul ah iyadoo ku xiran yoolalkaaga maaliyadeed. Waa mid la socota dareenkan farxadda leh, dareenka ah in aad dunida korkeeda joogto, dareemid dhammaystir, aasaasid, iyo guul.
Dareenku waa mid qofka u oggolaanaya inuu ogaado inuu isagu/iyadu dhaqaale ahaan madax -bannaan yahay sidaa darteedna uu gacanta ku hayo waqtigiisa, maaliyaddiisa, kheyraadkiisa, iwm. naftaadu waxay ku socotaa xorriyadda dhaqaalaha.
Sida loo helo xorriyadda maaliyadeed waxay ku lug leedahay dhaqannada ay tahay inuu qaado si uu lacag la'aan u noqdo waxaana ka mid ah:
Bal marka hore fiiri, ka dibna qorshee
Ku bixi wax ka yar inta aad kasbato
Samee shabakado badbaado oo ka caqli badan
Ka saar deynta
Si xoog leh u maal gali
Iibso hanti dakhli soo saarta
Mar walba ogow meesha aad dhaqaale ahaan joogto
Caado waa ficil si joogto ah loo sameeyo. Si aad dhaqaale ahaan xor ugu noqoto 2021 iyo wixii ka dambeeya, waxaa jira tallaabooyin maaliyadeed oo aad u baahan tahay inaad si joogto ah u samayso si aad dhaqaale ahaan u madaxbannaanaato. Waxaa ka mid ah:
Si buuxda u Bixi Kaararka Amaahda
Samee Kaydinta Tooska ah
Bilow Maalgashiga Hadda
Ka xaajooda badeecadaha iyo adeegyada
Noloshaada Hoosteeda Ku Noolow
Hel La -taliye Maaliyadeed
Nolosha, waa inaad dejisaa hadafyo SMART ah oo si taxaddar leh ula shaqeeya. Hadafyada nolosha maaliyadeed ee aad dejinayso waa inay ahaadaan kuwo gaar ah, la qiyaasi karo, la gaadhi karo, waaqici ah, oo wakhti ku xidhan.
Samee dhaqannada sida qorista inta ay tahay inaad ku yeelato koontadaada bangiga, hab -nololeedka maaliyadeed ee aad qaadanayso si aad u gaarto yoolalkaaga maaliyadeed iyo da'da ay tahay in tan lagu gaaro.
Dejinta himilooyinka maaliyadeed ee SMART waa mid aad loogu baahan yahay maxaa yeelay si gaar ahaaneed oo ahdaafta ayaa suuragal ka dhigaysa in la gaaro himilooyin maaliyadeed.
Samaynta miisaaniyad iyo ku -dheganaanshaheeda dhinac kasta oo ka soo horjeeda waa hab la hubo oo lacag la'aan ah iyo caado kaa dhigaysa mid dhaqaale ahaan kugu tiirsan.
Bixinta kaararka deynta oo buuxa ayaa ka mid ah siyaabaha lagu noqon karo lacag -la'aan waxayna tahay waxayna noqon doontaa hab wanaagsan oo lagu dhisi karo qiimeyn amaah oo wanaagsan.
Marka la abuurayo keydin otomaatig ah, mid ka mid ah waxyaabaha aadka loogu baahan yahay inaad samayso ayaa ah inaad marka hore iska bixiso naftaada. Waxa kale oo caqli -gal ah in la helo sanduuq degdeg ah oo ka -noqoshada degdegga ah kaas oo daaweyn u noqon doona xaaladaha degdegga ah.
LA XIDHIIDH BADAN: Sida lacag looga helo kaydinta 2021 | Talo Run ah
Maalgashigu waa mid ka mid ah caadooyinka kaa caawin doona inaad lacag la'aan ahaato oo taariikh ahaan la og yahay inay tahay hab wanaagsan oo lagu kobcin karo lacagtaada. Lacagta la maal -galiyay waxay ku baxdaa sixirka dulsaarka isku -darka kaas oo u sameeya koror ballaadhan waqti ka dib. Laakiin waxaa xusid mudan in waqti badan loo baahan yahay si loo gaaro koboc macno leh. Eeg sida loo maalgashado beeraha
Uruurinta amaahdu waa mid ka mid ah waxyaabaha la daawado maadaama ay caqabad ku tahay xorriyadda maaliyadeed. Daawashada amaahdaada ayaa kaa caawin doonta inaad hubiso caadooyinka maaliyadeed ee taxaddar la'aanta ah. Si aad tan u samayso waa inaad heshaa warbixinta amaahda si joogto ah si loo hubiyo inaad haysato diiwaanka caafimaadka maaliyadeed oo caafimaad qaba.
Akhri ALSO: Sida loo hubiyo in Kaarka Amaahdu uu shaqeynayo | Hagaha Tallaabo-Tallaabo ee 2021
Wada -xaajoodka, waxaad hubtaa inaad wax badan ku iibsato ama aad furto meherado cusub oo albaabka u furi kara qiimo -dhimis wanaagsan. Gorgortanku waa hab sugan oo lacag la'aan lagu noqon karo. Wada -xaajoodka waxaa hubaal ah inaad sannad walba ku badbaadiso kumanaan.
Waxbarashada joogtada ahi waxay ka mid tahay siyaabaha lacag la'aan lagu noqdo. Waxay ku lug leedahay dib -u -eegista dhammaan isbeddelada khuseeya sharciyada canshuuraha sannad walba si loo hubiyo in dhammaan hagaajinta iyo jarisyada loo isticmaalo si wax ku ool ah.
Waxay sidoo kale ku lug leedahay la socoshada wararka maaliyadeed iyo horumarka.
Dayactirka habboon wuxuu ka dhigayaa guryaha inay sii dheeraadaan oo ay jarto kharashkii ku bixi lahaa hagaajinta hanti kasta. Kani waa kiiska maxaa yeelay qiimaha looga baahan yahay in lagu ilaaliyo hantida waa qayb ka mid ah qiimaha beddelka.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Iibsado Guri Aan Lacag Lahayn 2021: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah
Ku hoos noolaanshaha hab -nololeedku waa mid ka mid ah caadooyinka ay cilmi -baaristu xaqiijisay in shaqsiyaadka lagu yaqaan hodantinimadooda ay soo bandhigeen ka hor intaanay barwaaqoobin. Markay sidaas tahay, waxay ka dhigan tahay in qofka si uu u helo barwaaqo (xor u ahaado dhaqaale ahaan) waa inuu qofku barto inuu ku noolaado meel ka hooseysa awooddiisa/keeda. Si tan loo sameeyo, waa inaad kala soocdaa waxyaabaha aad u baahan tahay iyo waxyaabaha aad rabto.
Helitaanka la -taliye maaliyadeed waa mid ka mid ah siyaabaha aad lacag la'aan ugu noqon karto la -taliyaha maaliyadeed ayaa ku bari doona oo kaa caawin doona inaad gaarto go'aannada maaliyadeed.
Ma xasuusan kartaa axiom caan ah oo taga, caafimaadku waa maal? Runtii tani waa lama huraan in la xusuusto haddii aad rabto inaad lacag la'aan ahaato.
Daryeelka caafimaadkaaga iyada oo loo marayo maalgelinta caafimaad wanaagsan iyo booqashooyinka joogtada ah ee dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta ilkaha iyo raacitaanka talooyinka caafimaad ee ku saabsan dhibaato kasta oo caafimaad oo aad la kulanto ayaa kaa badbaadin doonta sagaal iyo ka badan.
Si aad lacag la'aan ugu ahaato, waa inaad samaysaa dadaal taxaddar leh si aad u daryeesho caafimaadkaaga maadaama uu yahay mid caafimaad qaba oo hanti samayn kara.
WAA IN AAD AKHRISO: 11 Siyaabaha Ugu Raqiisan Oo Lagu Helo Caymiska Caafimaadka 2021
Waa maxay 10ka tallaabo ee xorriyadda maaliyadeed?
10 -ka tallaabo ee xorriyadda maaliyadeed waa; #1 Samee hadafyo #2 Samee miisaaniyad #3 Si buuxda u bixi kaararka deynta #4 Abuur Kaydka Tooska ah #5 Bilaw Maalgashiga Hadda #6 Daawashada Deyntaada #7 Ku Nool Hoostaada Meeshaada #8 Hel La -taliye Maaliyadeed #9 Daryeel Caafimaadka #10 Ka wada xaajood badeecadaha iyo adeegyada
Waa maxay Madaxbannaanida Maaliyadeed?
Madaxbannaanida maaliyadeed waa xaaladda haysashada dakhli ku filan si loogu bixiyo kharashyada nolosha qofka inta noloshiisa ka hartay iyada oo aan la shaqaalayn ama aan ku tiirsanayn shakhsiyaad kale.
Maxay xorriyadda maaliyaddu muhiim u tahay?
Xorriyadda maaliyadeed waa muhiim maxaa yeelay waxay kuu suurtogelin doontaa inaad si cad u qiimayso horumarka ay sameeyeen maalgashiyadaada mid kasta oo ka mid ah yoolalkaaga maaliyadeed.
Waa maxay sirdoonka maaliyadeed?
Sirdoonka maaliyadeed waa awooda lagu falanqeeyo tirooyinka si qoto dheer, loo xisaabiyo faa'idada, leverage, liquidity and ratio ratio. Waxa kale oo ay ka hadlaysaa fahamka macnaha natiijooyinka.
Sida aad ka ogtahay maqaalkan dhisiddiisa, waxaad noqon kartaa mid dhaqaale ahaan xor ah laakiin intaas dhaafsiisan iyo inta aad dhaqaale ahaan xor u ahaan doonto waxay ku xidhan tahay awoodda aad u leedahay inaad si taxaddar leh u dhaqanto caadooyinkaan aan kuu soo bandhignay kaa caawiya inaad lacag la'aan ahaato.
Halkan waxaa ah rabitaan wanaagsan oo adiga kugu saabsan. Ma sugi karno inaan maqalno ka faa'iidaysigaaga maaliyadeed ee qaddarinta qoraalkan. Farxad.
Investopedia.com - 12kaan Caadadood waxay kaa caawin doonaan inaad gaarto Xorriyadda Maaliyadeed
iwillteachyoutoberich.com - Sida Loo Gaadho DABKA: Madaxbannaanida Maaliyadeed, Hawlgabka Hore
moneyfcu.org - Dareenka Xorriyadda Maaliyadeed
practicalmoneyskills.com - 10 Siyaabood Oo Lagu Noqon Karo Madaxbannaan Dhaqaale
Sida Loogu Iibiyo Buugaagtii Aad Isticmaashay Khadka Tooska Ah Iyo Meelaha Ugu Wanaagsan Ee Lagu Sameeyo
Deynta kaarka amaahda waa mas'uuliyad aan la hubin oo ka dhalatay wareejinta amaahda kaarka deynta. Amaahiyayaashu waxay…
Lix Shahaadada Sigma Sanadka 2022 Tusaha Tallaabo-Talaabada Fudud
Lix Sigma Certification wuxuu la mid yahay macdanta dahabka ee shirkadaha iyo shaqsiyaadka labadaba. Laakiin marka hore, aan dib ugu noqonno…
Sida Loo Noqdo Wada -sheekeyste Wanaagsan | Hacks -yada ugu Fiican
La sheekaysiga ragga sida marwadu waxay kugu noqon kartaa caqabad haddii aad ku korto deegaan…